Biyo-dhaamis ka socda degmada Burtinlle xilli ay ka soo darayaan saamaynta abaaraha. – Radio Daljir
Burtinlle, April 16 – Ururo u dhaq-dhaqaaqa dadka danyarta ah ee magaalada Burtille ayaa bilaabay howlo biyo dhaamis ah iyada oo ay saamaynta abaarta ee degaanku marayso meel halis ah. Howlgalkan ayaa waxa dhaqaalaha ku baxaya iska aruuriyay dadwaynaha degaanka iyaga oo soo marsiiyay maamulka degmada.
Laba ururur – oo midi u dhaq-dhaqaaqo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay kan kalena yahay guddi loo magacaabay la tacaalidda dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha iyo u gargaaridda dadka ay abaaruhu sida daran u saameeyeen – ayaa horumuud ka ah maaraynta howlaha gargaarka kuwaas oo xoogga saaray dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada. Si kastaba ha ahaatee mid ka mida madaxda ururada ayaa sheegay in ay gargaarkan gaarsiin doonaan tuulooyin ku yaal hareeraha dagaalka.
Ceelasha magaalada Burtinlle ruuxooda ayay hogaamiyayaashaasi sheegeen in ay biyo-yareeyeen, waxana uu xusay dhaqaalaha ay hayaan kaliya ay ku gadi karaan 12 booyadood oo biyo ah, kuwaas oo aan ku fillayn in ay daboolaan baahida.
Abaaro aad u daran ayaa ka taagan guud ahaan gobollada Puntland iyada oo shalay la soo gaba-gabeeyay kormeer xaqiiqo raadin iyo isugu jira gurmad kaasoo ay madax sare oo ka tirsan dowladda Puntland ku soo mareen degaanno ka tirsan gobollada Nugaal, Karkaar iyo Bari kuwaas oo ay dadka ku nool la ildaran yihiin saamaynta abaaraha.
Waxa baaqday xilligii Dayrta ee kala hore, taasoo loo aanaynayo abaarta ba’an ee xilligan taagan, iyada oo haatanna lagu jiro xilligii gu’ga oo maalmihii la soo dhaafay si fiican uga da’ay gobollada koonfureed ee Soomaaliya.